बा*घले मान्छे खा*एको प्रत्यक्ष देख्ने बहिनीको बयान | आखैं अगाडी यसरी खा*यो हेर्नुहोस् Kailali News | Public 24Khabar
Home News बा*घले मान्छे खा*एको प्रत्यक्ष देख्ने बहिनीको बयान | आखैं अगाडी यसरी खा*यो...
बा*घले मान्छे खा*एको प्रत्यक्ष देख्ने बहिनीको बयान | आखैं अगाडी यसरी खा*यो हेर्नुहोस् Kailali News
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक बाटो नरोजेको दाबी गरे । ताजा जनादेशको लागि जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हुन नसक्ने भन्दै उनले सरकारले अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।
उनले भने,“कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैन भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरु । उहाँहरु राजनीतिक गर्नुहुन्छ कि जन्मकुण्डली पल्टाउनुहुन्छ ? कस्तो राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरु ?” अघिल्लो जनादेशबाट आएका पात्रहरु उपयुक्त नभएकाले निर्वाचनमा गएर नयाँ पात्र चयन गरी प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्घोष गरे । समय अगावै निर्वाचनमा जानु भनेको जनादेशप्रतिको अवहेलना नभई सम्मान भएको पनि उनले दाबी गरे ।
उनले भने,“जुन नेतालाई जनादेश प्राप्त भएन जनताबाट पराजित नेतालाई नै जस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने ? पराजित भएको जुन ठाउँ हो त्यही ठाउँ मलाई चाहियो भनेर अस्वस्थ्य अवाञ्चित क्रियाकलाप र समिकरण गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई धरापमा पार्ने काम कदापि हुन दिइने छैन । ” प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निदृष्ट गरेको बाटोमा सरकार हिँडेको भन्दै सरकारले सधैँ लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट चल्ने स्पष्ट पारे ।
उनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही नेताले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि एकजुट भएर चुनावमा जानुपर्नेमा पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने कमजोर बनाउने अपराधपुर्ण काममा लागेको आरोप लगाए । नेताहरुबाट भएका अस्वस्थ्य गतिविधिहरु अलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार र असंवैधानिक भएको टिप्पणी उनले गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुने बताए । निर्वाचनका लागि आयोगले पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको भन्दै उनले सबै नेपालीलाई निर्वाचनमा सक्रियताका साथ सहभागी हुन आग्रह गरे । उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरे । उनले भने, “केहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ भन्दै प्रश्‍न उठाएको सुन्छु । म जोड दिएर भन्न चाहन्छु चुनाव हुन्छ । वैशाख १७ गते र वैशाख २७ गते निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचनबाट फेरि एकपटक अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरुको दाउपेच चकनाचुर हुने छ । मुलुकले स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ ।” उनले प्राप्त उपलब्धिलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको र निर्वाचन पछि मलुकले स्थिर सरकरा र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचन पछि सम्मृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा भएरै छाड्ने बताए ।
उनले भने,“प्राप्त उपलब्धिका आधारमा अझै नेपाल बन्छ र बनाउन सकिन्छ भनी मेरो आत्मबल दृढ भएको छ । जुन आर्थिक वर्षलाई मैले समृद्धिको आरम्भ वर्षको रुपमा प्रस्तुत रो, त्यसै वर्ष म बिरामी परो । जुन वर्ष विकासका कामलाई हामीले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु थियो, त्यसै वर्ष कोभिड १९ को महामारीले हामीलाई पनि अत्यायो । जतिखेर राष्ट्र एक भएर महामारीका विरुद्ध जुध्नु पर्ने थियो, त्यही समय मेरा सहकर्मीहरु सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने उद्यम मा ज्यानै फालेर लाग्नुभयो ।”
Previous article३ वर्षे कार्यकाल पुग्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले गरे यति ठुलो घो*षणा, ओलीको वि*रोध गर्नेहरु च*कित !
Next articleक्याप्टेनसहित २३ जना सवार नेपाली से*नाको बस दुर्घ*टना